एनआरएनए आठौँ सम्मेलन नेतृत्व चयन सन्दर्भमा पूर्व अध्यक्ष एवम् अभियन्ताहरु यसो भन्छन् « Sansar News
२९ आश्विन २०७४, आईतवार ०९:०४
एनआरएनएको आर्ठौ विश्व सम्मेलनले कस्तो नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने चाहनु हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछाने लगायत एनआरएनए अभियन्ताहरु भन्छन् –
दम्भमुक्त नेतृत्व चयन हुन सकोस्
डा. उपेन्द्र महतो, संस्थापक अध्यक्ष, एनआरएनए
यहाँ संस्थापक हुनुहुन्छ, आजका दिनसम्म आइपुग्दा स्थापनाको लक्ष्यमा कति सफल भयौँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? एनआरएनएको स्थापनादेखिको यात्रा समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा ससांरभर फैलिएको नेपाली डायास्पोराकोे आर्थिक, व्यवसायिक र बौद्धिक क्षमतालाई समेटेर नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि कसरी उपयोग गनि सकिन्छ भन्ने जुन चिन्तनबाट प्रेरित भएर गैरआवासीय नेपाल अभियानको आरम्भ भएको थियो, हामीलाई सन्तोष छ आज त्यसले लगभग हरेक देशको नेपाली डायास्पोरालाई स्पर्स गरेको छ । अब देशमा बस्ने नेपालीहरुको सुख दुःख, खुशी पीडालाई बिसाउने थलो अर्थात् आफ्नै घरको रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ सबैका लागि स्विकार्य भइसकेको छ । हाम्रा सामूहिक प्रयासहरु पनि क्रमशः ठोस र मूर्त हुँदै गएका छन् । नेपालमा तिनको सराहना पनि भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान र गैरआवासीय नेपाली संघ अब उपेक्षा गर्न नसकिने संगठित प्रयासको रुपमा स्थापित भइसकेका छन् । नेपालको शान्ति र समृद्धिमा आफ्नो क्षमता अनुसारको योगदान दिने मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गराउने भावना बोकेको अभियान भएकोले यो यसरी नै फैलिने छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो । यसमा संसारभरका सबै देशका नेपालीहरुको समर्पण र निरन्तर मिहनेतको योगदान छ । यो निकै सन्तोषजनक प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
जनस्तरमा एनआरएनएको काम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला ?
मलाई प्रभावकारी हुन नसकेको जस्तो त लाग्दनै । हो, गैरआवासीय नेपाली समुदायप्रतिको अपेक्षाको तुलनामा योगदानमा केही कमी भएको हुन सक्छ । तर यो पहिलो पुस्ताको डायास्पोरा हो, जसका साधन र स्रोत सिमित छन् भन्ने यथार्थलाई पनि भुल्न हुँदैन । यिनै सिमितताका बाबजुद पनि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले जनस्तरमा आ–आफ्नो क्षमताअनुरुपको योगदान दिने प्रयास गरिराखेका नै छन् जस्तो लाग्छ ।
नेपाल सरकारले यहाँहरुको अभियानलाई कतिको सहयोग गरेको देख्नुहुन्छ ?
गैरआवासीय लगानीलाई भित्र्याउन प्रेरित गर्ने किसिमको वातावरण बन्दै गए पनि त्यसलाई नीतिगत स्वरुप दिने कुरामा निकै बिलम्ब हुने प्रवृति यो बीचमा देखियो । तर मुलुक लामो संक्रमणको संकटमा छ ।
त्यसैले स्वभाविक रुपमा सरकारको साधन, स्रोत र ध्यान त्यो संकटबाट मुक्त बनाउनेमा छ । तर सरकारले केही गरेन भनेर हामी निस्क्रिय बस्नु हुदैन । कठीन संक्रमणकालिन पीडित मुलुकका प्राथमिकतालाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । नागरिकस्तरमा पनि इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ, सरकारले गर्ने मात्रै भनेर हँुदैन, आफ्नो व्यक्तिगत योगदान के छ भन्ने आत्मबोध पनि गर्न सक्नुपर्छ । संविधान निर्माण पछि अब देश विकासमा केन्द्रित भएन भने आगामी पुस्ता समेत अन्यौलमै बाँच्न बाध्य हुनु पर्छ भन्ने सत्यलाई राजनीतिक दलहरुले बुझेका छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली समदुायको बढ्दो संख्यात्मक र गुणात्मक क्षमतालाई सही परिचालन गर्ने राष्ट्रिय नीति लिएर सरकार चाँडै अगाडि आउँछ छ नै ।
हालै सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका नेपाली नागरिकता लिई नसकेका सन्ततिलाई बढीमा चार वर्षका लागि नेपाली राहदानी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ, यस बारे यहाँको धारणा के छ ?
यो बुझ्न नसकिने निर्णय हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताका विषयमा नेपालीको नेतत्ृव वर्ग किन दुविधामा छ म ठम्याउन सकिरहेको छैन । एक पटकको नेपाली र तिनका सन्तान सधैंको लागि नेपाली नै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । त्यसैमा देशलाई पनि फाइदा छ ।
यहाँ आफै पनि ३ कार्यकाल नेतृत्व हाँकिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्न कतिको चुनौती छ ?
संसारको अर्काे कुनै डायास्पोरासँग हाम्रो जस्तो बृहत् र बिस्तारित संगठित संस्था छैन । अलिअलि नेपाली पुगेका हरेक देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको उपस्थिति छ । यस्तो विशाल संस्थाको नेतत्ृव गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने नै भयो । तर मेरो कार्यकालमा मलाई कुनै कठिनाई महसुस भएन । मैले सबै ठाउँमा सबै नेपाली दाजभाइ दिदीबहिनीबाट स्नेह र समर्थन मात्र पाएँ । के बिर्सनु हुन्न भने यो स्वेच्छाले समाजसेवाको भावना लिएर आएको विशुद्ध भोलिन्टियरहरूको संस्था हो । त्यसैले यसले लिने निर्णयहरू पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा त्यागको भावना हुनुपर्छ र दम्भमुक्त हुनुपर्छ । त्यत्ति भयो भने कुनै कठिनाई छैन ।
ठूलो संस्थाको नेतृत्वमा आएर त्यसबाट स्वार्थ लिन खोज्नेहरु पनि छन् भन्ने आरोप पनि सुनिएका छन्, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
यति ठूलो संस्थामा केही मानिस त्यस्ता पनि अवश्य होलान, तर त्यही नै मूल प्रवृत्ति हो भन्ने म मान्दिन । यसमा अधिकांश साथीहरू नेपालीसँग पुनः जोडिन, अझ सम्बन्ध सुदृढ गररे मातृभूमिमा केही व्यवसायिक योगदान गर्ने चाहनाले आएका छन् । मलाई धेरै गैरआवासीय साथीहरुले नेपालीमा लगानी गरेको देखेर बडो सन्तोष लाग्छ ।
पछिल्लो समय एनआरएनए भित्र राजनीतिकरण बढी भएको त सत्य हो नी ?
नेपालीहरू राजनीतिक रुपले निकै चेतनशिल प्राणी हुन् । फेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक चेतनालाई रोक्ने प्रयत्न प्रत्युपादक पनि हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि शक्ति र संगठन बिस्तार गर्ने नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको हुन्छ । तर सामाजिक संस्थामा प्रवेश गरिसके पछि केही सिमीतता र मर्यादालाई पालना गर्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलहरूको अतिरिक्त प्रभावलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ । म ऐक्यबद्धतामार्फत हाम्रा दलहरुलाई यो संस्था दलनिरपेक्ष नै रहँदा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छु ।
कतिपय देशमा यसका नेतृत्व नै म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न रहेको भन्ने घटनाहरु पनि बाहिर आए, यहाँले यस्तो सुन्नु भएको छैन ?
म्यानपावर व्यवसायमा हुँदैमा बहिष्कृत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर म्यानपावर सप्लाई मात्र होइन जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि अरूमाथि शोषण र अन्याय गर्न पाइँदैन । धेरैदेशमा गैरआवासीय नेपाली संघको बदनियतपूर्ण काम गर्ने, नेपालीहरूको शोषण गर्ने म्यानपावर कम्पनीको पहिचान गर्ने र ती माथि कानुनी कार्बाही गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । संघको आचारसंहिताले पनि तपाईले इंगित गर्न खोज्नुभएको प्रवृत्तिलाई रोकेको छ ।
एनआरएनए संगठन भित्र आउने विवादमा नेतृत्वले हस्तक्षेप किन गर्न सक्दैन ?
यसरी व्यापकरुपमा विस्तारित भएको विश्वव्यापी संगठनमा बेला बेला केही सामान्य असमझदारी देखिनुलाई म त्यत्ति ठूलो घटना मान्दिन । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको एकतामा मात्र हाम्रो शक्ति छ भन्ने बुझेका बिचमा जुन तीब्र गतिमा विवाद आउँछ त्यही गतिमा तिनको समाधान पनि भएका छन् । मुख्य कुरा हाम्रो साझा सपनाबाट हामी कहिल्यै विचलित हुन हुँदैन ।
यो सम्मेलनले कस्तो नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
माथि नै भनिसके सबै गैरआवासीय नेपालीहरुले एकतामा मात्र हाम्रो शक्ति छ भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले यो सम्मेलने गैरआवासीय नेपाली भित्रको यो एकताको भावलाई झन् सुदृढ पादै नेपाली समाजलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकोस्, गैरआवासीय नेपाली सघंले योजना गरेका सबै संगठित प्रयासहरुलाई मूर्तता दिन सक्ने सक्षम र संघको गौरवपूर्ण इतिहासको चेत भएको उदार नेतत्ृव चयन गरोस् ।
संघको मर्म र उद्देश्य बुझेको, सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गरोस्
जीवा लामिछाने, प्रमुख संरक्षक
एनआरएनएको स्थापनादेखिको यात्रा समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको यो चौध बर्ष यात्राका सकारात्मक पाटाहरू धेरै छन् । पहिलो कुरा त मस्कोको एउटा कोठामा केहि व्यक्तिहरूले छलफल गरेर अघि बढाएको यो अभियानले आज विश्वव्यापी रुप लिएको छ । ७७ देशमा त संस्थागत रुपमा नै हामी संगठित भैसक्यौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको परिचय, गैरआवासीय नेपाली ऐन–२०६४, संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धि प्रावधान आदी हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हुन् । त्यसैगरी यस बिचमा नेपालमा संस्थागत रुपमा नै परोपकार र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान भएको छ । सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न परियोजनाहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्रिने क्रम पनि बढ्दो छ ।
तपाई संस्थापक हुनुहुन्छ, आजका दिनसम्म आइपुग्दा स्थापनाको लक्ष्यमा कति सफल भयौँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
संस्थाले लिएका कतिपय उद्देश्यहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । सबै उद्देश्यहरू पुरा भए कि भएनन् भनेर खोजि गर्ने बेला अहिले भईसकेको छैन । मुख्य कुरा संघ उद्देश्यअनुरुप सहि दिशातर्फ उन्मुख छ कि छैन भन्ने हो ।
जनस्तरमा एनआरएनएको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिन्छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सामाजिक संस्थाका आफ्नै सिमितता हुन्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि गैरआवासीय नेपाली संघले जनस्तरमा परोपकार र मानवीय सहयोगका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई कम आंकलन गर्नुहुँदैन ।
नेपाल सरकारले यहाँहरूको अभियानलाई कतिको सहयोग गरेको पाउनु हुन्छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघले उठाएका हरेक मुद्दाहरूमा सरकार पक्ष संधै सकारात्मका रहेको मैले पाएको छु । हो, केहि मुद्दाहरूमा सरकारी पक्ष र राजनीतिक पार्टीहरूलाई कन्भिन्स गर्न हामीलाई केहि समय लाग्यो । तर, हामीले उठान गरेका धेरै मुद्दाहरू पूर्णरुपमा र केहि मुद्दाहरू आंशिक रुपमा सम्बोधन भएरै आएका छन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा मैले सधै भन्दै आएको छु, हाम्रो जिम्मेवारी झन बढेको छ ।
हालै सरकारले विदेशमा रहेर विदेशी नागरिकता लिइ नसकेकाको सन्ततिलाई बढीमा चार वर्षका लागि नेपाली राहदानी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ, यस बारे यहाँको धारणा के छ ?
यो निर्णय सायद विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूका सन्तानले यदि विदेश नागरिकता लिएका छन् भने उनीहरूलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको हो जस्तो मलाई लाग्यो । बिदेशमा जन्मे हुर्केर नेपाली नागरिकता कायमै राखेका सन्तानहरूको हकमा यसको जरुरत नै रहेन । नेपालको संबिधान २०१५ ले ‘गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता दिइनेछ’ भनेर उल्लेख भैसकेकोले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला भैसक्यो । संबिधानको मर्म बमोजिम कानून बनेर आएपछि हामीले प्राप्त गर्ने नागरिकताले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
ठूलो संस्थाको नेतृत्वमा आएर त्यसबाट स्वार्थ लिन खोज्नेहरू पनि छन् भन्ने आरोप पनि सुनिएका छन्, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि सल्बलाउने वर्ग संधै सक्रिय रहने गर्छ । नेतृत्वले त्यस्ता व्यक्ति समूहलाई समयमै चिनेर उनीहरूको उद्देश्यलाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा जातीय–वर्गीय हिसाबले पनि विभाजन गराउने समूह सक्रिय देखिन्छन, उनीहरूबाट पनि बच्न सक्नु प¥यो । नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले सबै सदस्यहरूसँग समभाव र समव्यबहार गर्नुपर्दछ । यो नजिक– त्यो टाढा भन्ने प्रवृत्तिले संस्थामा एकता कायम गर्न सक्दैन ।
पछिल्लो समय एनआरएनए भित्र राजनीति बढी हाबि भएको त सत्य हो नी ? संगठन भित्र आउने विवादमा नेतृत्वले हस्तक्षेप किन गर्न सक्दैन ?
समग्रमा नेपालका मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघलाई बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूको यो साझा संस्था हो भन्ने रुपमा नै लिएका छन् । समस्या मैले हामी भित्रै देखेको छु । सबैको साझा संस्था हुँदाहुँदै पनि आफ्नै भातृसंगठनका, आफूसँग राजनीतिक आस्था मिल्ने साथिहरू नेतृत्वमा ल्याउन हामी उन्मुख हुने गर्छौ हरेक व्यक्तिले हाम्रो होइन राम्रो व्यक्तिले नेतृत्व गर्नु पर्छ भन्ने नसोचेसम्म सवल नेतृत्व संस्थामा आउन सक्दैन ।
गैरआवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य बुझेको, सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
पुरानो नेतृत्वले सुरु गरेका अपुरा कामको पूर्णता र संघले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप गर्नुपर्ने नियमित कामहरू नै हुन् । जस्तै पूनर्निर्माण सम्बन्धि भएका सम्झौताहरूको कार्वान्वयन, एनआरएनएको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने, नागरिकता निरन्तरतालाई सरकारसंगको सहकार्यमा टुंगो लगाउने, सामाजिक कार्यको निरन्तरता आदि मुख्य काम हुन् ।
सफल नेतृत्व पाउनेमा म ढुक्क छु
लोकप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति बेल्जियम
अध्यक्ष, बेल्जियम बेल्जियमको आन्तरपेनमा शुशि तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका धादिङका लोक दाहालले एनआरएनए बेल्जियमको अध्यक्ष सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । बेल्जियममा सफल व्यवसायीका रुपमा परिचित दाहाल समाजसेवामा समेत उत्तिकै सक्रिय छन् । उनकै पहलमा १ वर्ष अघि आगोले पोलेर घाइते भए पनि उपचार नगराइ घरमै रहेका एक राउटेलाई अछामबाट काठमाडौँ ल्याइ उपचार गराईएको थियो । नेपालमा गएको महाभूकम्पका बेला पनि नेपाल आई पीडित नेपालीको सेवामा जुटेका थिए । दाहालले जनप्रगतिशिल मञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र २०१३ देखि २०१५ सम्म नेपाली व्यवसायी संघ बेल्जियमको महासचिवको जिम्मेवारी समेत सफलतापूर्वक निभाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको हालै सम्पन्न अधिवेशनले दाहाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालसँग विश्व सम्मेलनका विषयमा रहेर गरिएको कुराकानी :
नयाँ कार्यसमितिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ, कस्तो अनुभव भएको छ ?
मैले यस अगाडीको कार्यकालमा महासचिवको भूमिका निभाएको थिएँ । महासचिवको भूमिकामा रहँदा मैले बेल्जियमको समाजलाई जोड्ने, एनआरएनको गतिविधिलाई बेल्जियमबासी नेपालीहरू बिच पु¥याउने कार्यमा गुणात्मकरुपले अगाडी बढेको यहाँका नेपाली समाजले अनुभव गरेका छन् । बिगतको कामको मुल्याकंन र समाजसेवा प्रति मेरो दृढतालाई नै बेल्जियमको समाजले मलाई अत्याधिक मतले विजय बनाउनु भएको हो । यो विजयले मलाई अरु जिम्मेवार बनाएको छ र बेल्जियमका नेपाली समुदायप्रतिको थप उत्तरदायित्वलाई महशुस गराएको छ ।
आफ्नो कार्यकालको भावि योजना तथा कार्यक्रम के बनाउनु भएको छ ?
एनआरएनए आईसीसीले निर्देश गरेका कार्यलाई लागू गर्नेु प्रमुख दायित्व मेरो रहन्छ । यसबाहेक बेल्जियमका स्थानिय समस्याहरूलाई हल गर्ने र नेपालको सांस्कृतिक, रहनसहन, पर्यटन विकास, नेपाली समानलाई बेल्जियमको बजारमा ल्याउने र नेपालीको एतिहासिक परम्परालाई निरन्तरता दिँदै लैजानु पर्नेे देखिन्छ । एनआएनए विसुद्ध सामाजिक संस्था भएको कारण हाम्रा गतिबिधिरु पनि सामाजिक नै हुने गर्दछन् । बेल्जियमको समाजलाई ऐक्यबद्ध गर्दै एनआरएनलाई साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्नु र नेपालमा भैपरि आउने समस्यालाई अग्र स्थानमा रहेर सहयोग गर्नु मेरो प्राथमिकतामा पर्दछ । मेरो जोड नेपालमा रहेका नेपालीहरू र प्रवासमा रहेका नेपालीहरू बिच सुमधुर सम्बन्ध बढाउने र एक आपसमा सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नमा केन्द्रित रहने छ ।
एनआरएनएको आठौँ विश्व सम्मेलनले कस्तो नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
एनआरएनको आठौँ सम्मेलनले बिगतमा एनआरएनएले थालेका कामहरूलाई निरन्तरता दिदै सम्पन्न गर्ने नेतृत्व चयन होस भन्ने मेरो चाहना हो । जो नेतृत्वमा आए पनि एनआरएनमा विगत लामो समय देखी काम गरिसक्नु भएकै र अनुभवि हुने भएकाले बिगतको नेतृत्व जस्तै सफल नेतृत्व पाउनेमा म ढुक्क छु ।
पछिल्ला दिनमा एनआरएनए भित्र राजनीतिकरण बढी छिरेको भन्ने टिप्पणीमा तपाईको धारणा के छ ?
मेरो बिचारमा एनआरएन पनि हामी जस्तै मानव हुन् । चेतनशिल मानवमा राजनैतिक विचार बहस छलफल हुनुलाई म नराम्रो ठान्दिन । कुनै पनि राजनैतिक व्यक्तित्व एनआरएनको विधानलाई मानेर नेतृत्वमा आउँदा उ स्वतः सामाजिक व्यक्तित्व बनेर एनआरएनमा आएको हुन्छ । कसैको बिगतलाई हेरेर राजनीति भयो भन्नु उपयूक्त हो जस्तो लाग्दैन । तर पनि हामी नेपाली समाजकै उपज भएकोले कतै न कतै राजनीतिमा जोडिएको देखीनुलाई पनि अन्यथा लिन हुँदैन ।
एनआरएनएलाई सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको संस्था बनाउन नयाँ नेतृत्वले केमा ध्यान दिनु पर्ला ?
बहुसंख्यक प्रवासी नेपालीहरूलाई एनआरएन भनेको हुने खानेको क्लब हो भन्ने लागेको छ । यो बिषयमा एनआरएनका नेतृत्वहरूले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । एनआरएनए मालिक प्रधान भएको देखिदै गएको छ यो निरन्तरतालाई भंग गर्दै मजदुरमुखी कार्यनीतिमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा ऐक्यबद्धता मासिक बिगत लामो समय देखी बिदेशमा रहेका नेपालीहरूको गतिविधीलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिदै आएकोप्रति आभार प्रकट गर्दछु । यो पत्रिकाले नेपालमा भएको परिवर्तनलाई बिदेसमा रहेका नेपालीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट बाहीर ल्याउने भूमिका देखी विकास निर्माणमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु भएको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै मलाई तपाईको पत्रिकामा मेरो बिचार राख्न दिनु भएकोमा पनि धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
धनीहरुको क्लब हो भन्ने भ्रम हटाउनु पर्छ
अध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति केन्या
एनआरएनए केन्या नयाँ कार्यसमितिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ, कस्तो अनुभव भएको छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघ केन्याको अध्यक्षमा निर्वाचित हुन पाउँदा म निकै हर्सित छु । यो भन्दा पहिले २ पटक महासचिव भएर यसै संस्थामा काम गरेकोमा अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु भएकोमा केन्यामा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै सहयोगको लागि हार्दिक अपिल पनि गर्दछु ।
आफ्नो कार्यकालका लागि भावि योजना तथा कार्यक्रम के बनाउनु भएको छ ?
मेरो भावी योजना भनेको सामूहिक नेतृत्व स्थापित गर्ने हो । साथै केन्यामा रहनुभएका नेपालीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने, हाम्रो संस्थामा आबद्ध नभएका साथीहरूलाई पनि समेट्ने छु ।
अर्काे मानव तस्करीको शिकार भएकाहरूलाई तत्काल सहयोग गर्ने, नेपाल र नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने, यहाँका स्थानीय संघसस्थाहरूसँग मिलेर उल्लेख्नीय सामाजिक काम गर्ने, जस्तो कि रक्तदान, अनाथहरूलाई लत्ताकपडा, खाद्यान्न, र अन्य सामाजिक कामहरू गर्ने योजना छ ।
आठौँ विश्व सम्मेलनमा हामीलाई एउटा सक्षम नेतत्वको खाँचो छ । जनमानसमा यो संस्था धनीहरूको एउटा क्लब हो भन्ने भ्रमलाई हटाउनु पर्दछ । । तर मेरो विचारमा यो संस्था सबैलाई समेट्ने खालको होस् । हुनत कुनै पनि संस्था चलाउन आर्थिक कुरा पनि निकै ठूलो कडीको रुपमा हुन्छ तर यसो भन्दा गनेचुनेका धनीहरू मात्रै नेतृत्वमा चयन हुनु पर्छ भन्ने होइन र राम्रो काम गर्न सक्ने नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तीले पनि अवसर पाउनु पर्छ भन्ने म चाहान्छु । मैले २०१५ को अधिबेशनमा पनि व्यक्तिगत रुपमा सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक हिसाबले नेतृत्वपंक्तिमा मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ ।
सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्था बनाउन नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ । धेरैले के पनि भन्छन् भने ‘गैरआवासीय नेपाली संघमा लागेर के हुन्छ ?’ किन हामी यस्मा लाग्ने ? सँधै पैसा मात्र माग्छन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचित कार्यसमितिले यस्ता कुरामा ध्यान देओस् । आफूले सक्ने काम गरौँ, नसक्ने कुरा नगरौँ । काम गरेर देखाउने हो र गफ लाएर काम छैन । सस्तो गफ हामीलाई चाहिएको छैन, हामी काममा विश्वास गछौँ ।
सबैलाई समेट्ने नेतृत्व चयन होस्
अध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति युगाण्डा
एनआरएनए युगाण्डा, अफ्रिका एनआरएनए युगाण्डाको अध्यक्ष हुनु भएको छ कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
संस्थाको जिम्मेवारी काँधमा आउँदा म खुसी नै छु । साथै चुनौती पनि थपिएका छन् संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चासो र चिन्ता छ । विगतका दिन भन्दा अझ बढी संस्थालाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छु भन्ने कुरा मेरा लागि महत्वपूर्ण हुन् । मलाई साथ, सहयोग र विश्वास गरेर संस्थाको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा म गौरवान्तित पनि भएको छु ।
आगामी दिनमा युगाण्डामा रहेका नेपाली र नेपालको हितका लागि भावि योजना के–के बनाउनु भएको छ ?
नेपाल र नेपालीको हितमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । नेपाल र युगाण्डाको मैत्रीभावको विकास गर्ने, युगाण्डामा रहनु भएका नेपालीहरूलाई एनआरएनएभित्र ऐक्यबद्ध बनाउने, नेपाली संस्कृतिको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्ने, नेपाली पर्यटनको प्रचार–प्रसार गर्ने । नेपाल र युगाण्डाली नागरिकबीच मित्रताको विकास गराउने काममा मेहनतका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
एनआरएनएमा अबको नेतृत्व कस्तो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?
संसारभरी रहेका नेपालीलाई संघको एउटै छाताभित्र ल्याउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वको आवश्यकता भएकोले त्यस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छु । अर्कोकुरा सबैको मनोभावना बुझ्ने, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने, सबै सरोकारवालासँगको सकारात्मक समन्वयमा देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । अर्कोकुरा कसैमा पनि वैरभाव नराखी हरदम एकतामै प्रयास गर्ने व्यक्ति नै अबको एनआरएनएको नेता होस् भन्ने चाहान्छु ।
संस्थागत विकास र सांगठनिक सुधार समेत गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गरोस्
अध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति आयरल्याण्ड
अध्यक्ष, एनआरएनए आयरल्याण्ड एनआरएनए आयरल्याण्डको नेतृत्व काँधमा लिनु भएको छ कस्तो अनुभव गुर्न भएको छ ?
केही जिम्मेवारी, केही उत्साह, उमंग साथै उर्जा मिलेको अनुभव भएको छ । म यस संस्थाको संस्थापक महासचिव पनि भएकाले संस्थासँग नौलो भने होइन् । यो निरन्तर अभियान हो । जहाँ नेपाल र नेपाली कहिँ न कहिँ जन्मभूमि र कर्मभूमि सँग जोड्न अभियान हो । त्यसमा सेवाको भावले नै लागेको छ ।
यहाँको भावि योजनाहरु के–के छन ?
हामी आफ्नो विभिन्न परिवेश र परिस्थिति जस्तै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, बेरोजगारी लगायतका कारण विदेशीदै गर्दा हाम्रो माटो, समाज, परिवारले केहि नै केही अपेक्षा राखेको नै हुन्छ । हामी सबैले नेपालको अवस्था नराम्रो भनेर आलोचना पनि गर्दै आएका छौं । तर, अब सकारात्मक सोचबाट आ–आफ्नो ठाउँबाट केही गरौं भन्ने नै हो । जसका लागि हामी हरेक सदस्यले नेपालको पिछडिएका दुर्गम गाउँहरुमा ‘एक सदस्य एक कार्यक्रम’ त्यो शिपमुलक, ज्ञानवद्र्धक र अन्य उदाहरणीय काम गर्ने योजना सुरुवात गर्दैछौं । जसका लागि ३ महिनाको योजना, अध्ययन, समय र १८ महिनाभित्र पूरा गर्ने हामी सबैको संकल्प छ । साथै एनआरएनए आयरल्याण्ड महिला फोरम गठन गरि एक युरो अभियान कार्यक्रमको विकास गरेर दुर्गममा पीछडिएका महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा हाम्रा महिला संयोजक अन्जु काफ्ले, उपाध्यक्ष चन्द्रकला निरौला, शोभना पन्त लगायतका साथीहरु सक्रिय भएर लागिसक्नु भएको जानकारी पनि गराउँदछु ।
अर्को कुरा विद्यार्थीका विभिन्न समस्यामा होस् या युवा, खेलकुद, भाषा संस्कृतिको सम्बद्र्धन र जर्गेनाका विषयमा संस्थाको वेवसाइटका विषयमा योजनाबद्ध रुपमा लाग्ने र यहाँ रहेका सबै संघसंस्थासँग ऐक्यबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा कटिबद्ध छ । साथै स्थानीय समाजका लागि पनि एनआरएनएले केहि गर्ने योजना बनाएको छ ।
यहाँको विचारमा एनआरएनएको आगामी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला ?
आम गैरआवासीय नेपालीको आसा र भरोसाको केन्द्र रहेको संघलाई अझ उचाइमा पु¥याउन सक्ने, विस्वाशिलो नेतृत्व जसले संस्थाको गरिमालाई उचाइमा पु¥याएर संस्थागत विकास, सांगठनिक सुधार समेत गर्न सक्ने नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहान्छु ।
एनआरएनएमा पछिल्लो समय राजनीति हावि भएको भनिन्छ नी तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिक कहाँ हुँदैन र, तर अब हामीले यो भन्दा माथि उठेर सबैको भावना, आस्था र विश्वासलाई लिएर हाम्रालाई मात्र होइन, राम्रालाई पनि अघि बढाउने संस्कारको विकास ग¥यौं भने मात्र हामी समृद्ध समाज र राष्ट्रको कल्पना गर्न सक्छौ ।
एनआरएनएलाई सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको संस्था बनाउन नयाँ नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
नयाँ नेतृत्वमा मुख्य कुरा सबै वर्गका प्रवासी नेपालीहरुको पहुँच र अपनत्व हुनुपर्छ । सबैको भावना समेटिनुपर्छ । हरेकको मनमा छुने प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । तसर्थ यो संस्था सबै एनआरएनहरुको साझा संस्था बन्न जरुरी छ । त्यो विषयमा अबको नेतृत्वले गहिरोरुपमा सोच्न जरुरी छ ।
(प्रस्तुत अन्तर्वार्ताहरु ऐक्यबद्धता मासिकको असोज अंकमा प्रकाशित छन् । )